Ngaba kufuneka ndiqeshe uMlawuli weProjekthi yeNdlu ye Flip yam?
uJanuwari 10, 2017 by IBethany Pembrook, Iimbono zizonke:
Umlawuli weProjekti ubeka ilindle kwindlu ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni - ukusuka kwiziseko ukuya kuyilo lwangaphakathi! Banokuba luncedo olungakholelekiyo, bahlala belawula, beqeqesha, bekhuthaza iqela lonke labaqulunqi kunye neekhontrakthi ukuba zenze iprojekthi. Ngaba kufuneka uqeshe enye?
Umphathi weProjekhthi kwi-flip yendlu yakho uya kusebenza njengenkokeli ethatha izigqibo, enika amanye amalungu eqela imisebenzi, kwaye angena ancedise xa enye indawo yeprojekthi isiya ngasemva. Unokungavumi ukuqesha umphathi weprojekthi ekuqaleni, njengoko iyindleko eyongezelelekileyo, kwaye yinto onokuziva ngathi unokuzigubungela. Nangona kunjalo, inyani inokuphelisa ukonga imali ekuhambeni kwexesha ngokwemisebenzi yeprojekthi kunye nemveliso yabasebenzi.
Wenza ntoni umphathi weprojekthi imihla ngemihla?
Ngomhla womsebenzi oqhelekileyo njengomphathi weProjekthi, unokwenza isicwangciso sokusebenza kwemini, esongamela umsebenzi ogqityiweyo, uxoxe ngezicwangciso kunye nabakhi, kwaye uxoxe ngenkqubela phambili yeprojekthi kunye nawe.
Ukulawula yonke le nto iya kufuna ulwazi olukhulu lokubhabha kwendlu, kubandakanya yonke into ukusuka kwizinto zokwakha ukuya kuyilo lwangaphakathi olugqityiweyo. Kuya kufuneka uqiniseke ukuba uqinisekisa ukuba banokuqeqeshwa okwaneleyo kokuphathwa kweprojekthi, kunye nezakhono zokugada kunye nezentengiso. Umphathi wakho weprojekthi uya kuhlala enxibelelana nawe ukuseka ubudlelwane obulungileyo kunye nokuqinisekisa ukoneliseka kwakho ngumthengi. Jonga ukuba bakulungele ngokupheleleyo na-kufuneka babenesiqinisekiso sekhosi njenge Ikhosi yePrince2 okanye uqinisekiso lwe-PMP lokuvunywa.
Baza kusebenza nzima ukuvelisa kwaye bagcine imeko elungileyo kwaye bancede ukugcina amanqanaba amandla omntu wonke kunye nokuzimisela malunga neprojekthi, ngethemba lokuba iya kuphucula impumelelo yeqela lakho kunye nokusebenza ngokubanzi. Kwaye, uyenza yonke le nto ngeli xesha usaseleyo ngoku kunye nanamhlanje kwiindlela ezintsha zokuyila, iindlela zombala wokuqamba, kunye nezisombululo zoyilo zoyilo.
Ngaba kufuneka ndiqeshe umphathi weprojekthi yendlu yam?
Ngaba ucinga ngokuqesha umphathi weprojekthi yobuchule weprojekthi yakho yasekhaya? Mhlawumbi unomsebenzi osisigxina, kwaye awazi ukuba uza kuba nalo na ixesha? Abalawuli beeprojekthi bamakhaya angatshatanga eza lula. Kukho ezinye phaya kodwa kunzima ukufumana!
Kwakhona, kukho impikiswano yokuba ukuba umntu ulungile kulawulo lweprojekthi, omnye uya kuba ngumakhi. Ezi ntsuku zininzi, ukuba azikho uninzi, iifemu ezincinci zisebenza kuphela kwi-subcontract zabasebenzi, ke akunakufuneka uqeshe umphathi weprojekthi.
Umphathi weProjekhthi kwi-flip yendlu yakho uya kusebenza njengenkokeli ethatha izigqibo, enika amanye amalungu eqela imisebenzi, kwaye angena ancedise xa enye indawo yeprojekthi isiya ngasemva.
IBethany Pembrook January 10, 2017
Olu ngeno yafakwa kwi Indawo yokwakha izindlu noqhotyosho Qesha uMlawuli weProjekthi, IProjekthi yeKhaya, Umphathi weprojekthi yeKhaya, Indlu Flip, Ukubhabha kwendlu, IProjekthi yeNdlu, Umphathi weProjekthi yeNdlu, Indlu, Umlawuli weProjekthi eyiNgcali, Umlawuli weprojekt, Umanejala weProjekthi yePropathi, Umanejala weProjekthi yeZindlu. Bookmark le Permalink.
Disemba 22, 2016 Iindleko ezisisiseko zeFlip yeNdlu Ukutyala imali kwiarhente yokuthenga izindlu kuhlala kungumbono olungileyo. Abantu abaninzi ngakumbi bathatha isigqibo sokuthenga iipropathi ukuze baziphose. Oku kuthetha ukuba bathenga ipropathi, bayihlaziye kwaye bayithengisa ngexabiso eliphezulu. Ukuba uyilo lwasekhaya kwaye ufuna imiceli mngeni emitsha kwinkqubela phambili yakho, oku kunokuba yinto ekufanele ukuba uzama ukuyenza. Ingaba kubiza malini ukuntywila indlu? Size noluhlu lweendleko ezisisiseko zeflip yendlu eza kukunceda ungene kwihlabathi […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Matshi 13, 2018 Iingcebiso ngohlahlo-lwabiwo mali lolwandiso Ezi ntsuku, ukuhambisa indlu kaninzi kunokubonakala ngathi kukuphithizela okukhulu kunokuba kufanelekile. Emva kwayo yonke loo nto, iifizi zomthetho kunye nomsebenzi wesitampu ungadla kwiimali zakho ezixabisekileyo- kwaye ngaphambi kokuba uqaphele uxanduva lokupakisha yonke into kunye nokulungiselela i-vans yokususa. Yiyo loo nto unokukhetha ngokufanelekileyo ukwandisa ikhaya lakho ngoku. Nangona kunjalo, uhlahlo-lwabiwo mali lwale projekthi lunokubangela imiceli mngeni, kungoko sonwabela ukubonelela ngezi ngcebiso zilandelayo ... Dwelisa yonke into […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Julayi 25, 2018 Yintoni onokuyilindela kuMakhi oPhetheyo-Imisebenzi kunye neMisebenzi Ngokuchasene noko abanye abantu banokukholelwa ukuba abakhi bamakhaya ayizizo iikontraki okanye abachweli kuphela abadlala indima yabo endlwini kwaye bemka. Umakhi wezindlu uthelekiswa ne-CEO okanye umphathi olawulayo ngokwemisebenzi yeentlobo ngeentlobo ngelixa esongamela yonke iprojekthi ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni. Eminye yemisebenzi yemihla ngemihla ekufuneka beyigqibile ibandakanya oku kulandelayo: Ukuqonda ubunzima bokwakha amakhaya. Ukuthathela ingqalelo kuzo zonke iinkcukacha […] exhonyiweyo Indawo yokwakha izindlu
Oktobha 30, 2018 Izinto ezi-4 ekufuneka ziqwalaselwe xa usakha ikhaya elungiselelwe kwangaphambili Amakhaya agcinwe kwangaphambili afumana ngokukhawuleza yonke ingqumbo ngenxa yenani lezibonelelo zayo ngaphezulu kweendlela zokwakha izindlu zesintu. Bathengile, bathathe ixesha elincinci ukuba babeke, kwaye babe nokuchitha kancinci. Kodwa ukwakha ikhaya le-preab kufana nokwakha ikhaya lemveli kuba kufuneka kubekho ucwangciso oluchaphazelekayo ngaphambi kokuba lwakhiwe. Nazi izinto ekufuneka uzikhumbule xa ucwangcisa ikhaya esele libekelwe lona: Yenza isigqibo kuhlahlo-lwabiwo mali. Nangona amakhaya amiselwe kwangaphambili [] exhonyiweyo Indawo yokwakha izindlu
Disemba 26, 2018 Izinto ezifanele ukuboniswa kuMakhi weNdlu eSebenzayo Wonke umntu ofuna ukwakha indlu kuya kufuneka azixhalabise ngezinto ezininzi, kwaye enye yezona zinto zibalulekileyo kukhetho lomakhi wendlu. Ungumntu oza kuba ngumphathi wokwakha indlu yakho. Umakhi olungileyo kunokuba nzima ukuba afumane kuba ufuna ukuba bathembeke, kwaye nabo, bafanele bawenze kakuhle kakhulu umsebenzi wabo. Kufuneka ikhunjulwe kwakhona into yokuba akufuneki zibize imali eninzi. Ke, ukufumana eyona ngxaki ilungileyo yeyona ngxaki […] exhonyiweyo Indawo yokwakha izindlu
Septemba 26, 2016 Iingxaki zokwakha zasehlotyeni Ngenxa yezizathu ezininzi, Ihlobo lihlala lenza ixesha lengcinga yokwakha indlu yakho entsha. Umhlaba uyanyibilika kwaye kulula ukushukuma, ngakumbi oku kuluncedo xa ilixesha lokumba isiseko. Akukho nkxalabo malunga nokuqhobosha umbhobho okanye ukuqhekeza, ke ukuntywila ngemibhobho kungangena ngokukhawuleza. Ulwakhiwo luhamba ngokukhawuleza kakhulu ehlotyeni njengoko, uthintela imvula embalwa apha naphaya, akukho okuninzi kwindlela yokubuyela umva ekwakheni isakhelo kunye nengaphandle lendlu yakho. I […] exhonyiweyo Indawo yokwakha izindlu
Ngamana 3, 2016 Ukwakha indawo yakho yeKhaya Ithunyelwe ngu: Jan Burmistroff Kuzo zonke iinkcitho ezaziwayo ezinxulunyaniswa nendlu yophahla, uphahla lubonakala njengelona lunobuqili kwaye lubiza kakhulu. Ngaphandle koko, eso sakhiwo siya kufuneka senziwe kakuhle. Eyona mpazamo incinci ngokuphahla kunokubangela ukuvuza kwaye ngenxa yoko ukubola kweenkuni. Kwakhona, uphahla olubi luyakwenza ukuba indlu ilahle ii-aesthetics zayo. Kungenxa yezi zizathu abantu abaninzi betyala imali kunye nemali eyongezelelweyo ukuqinisekisa ukuba uphahla lwendlu ye-log lukhona. […] exhonyiweyo Indawo yokwakha izindlu, Indawo yokuthengisa izindlu eluhlaza
Oktobha 11, 2018 Iimpawu ezi-5 zoMakhi olungileyo weKhaya ekufuneka ziqwalaselwe Iimpawu zoMakhi weKhaya onoxanduva Ufuna ukuqesha umakhi ofanelekileyo wekhaya xa sele ukulungele ukwakha ikhaya lakho. Ufuna umgangatho kunye nobomi obude; ngenxa yoko, awuzimisele ukuthatha amathuba kuhlobo lomakhi wekhaya oliqeshela ikhaya lakho elitsha. Awufuni kwakha ikhaya lakho kwiveki enye, kwaye ngosuku olulandelayo luyabhabha, ukanti uye wangena kunye nosapho lwakho. Nangona kunjalo, awunaso isizathu sokukhathazeka xa uqasha ikhaya elinobuchule […] exhonyiweyo Indawo yokwakha izindlu